A Korean Odyssey ( 2017 ) - Myanmar Asian TV Channel
2017 နှစ်ကုန်ခါနီးမှာ ထွက်ရှိလာတဲ့ KDrama လေး တစ်ခုပါ … လူကြီးအစ ကလေးအဆုံး မသိတဲ့သူ မရှိလောက်အောင်ကို ကျော်ကြားတဲ့ ” Journey to the West “ ကို အခြေတည်ပြီး 21 ရာစု အသွင်အပြင်နဲ့ ခံစားကြည့်ရှုရမှာ ဖြစ်ပါတယ် …
ထို ဇာတ်လမ်းတွဲကို ရေးသားသူကတော့ My Girlfriend isaNine-tailed Fox , Master’s Sun အစ ရှိတဲ့ နာမည်ကြီး Fantasy ဇာတ်လမ်းတွဲများကို ရေးသားပေးခဲ့တဲ့ Hong Jung-eun နဲ့ Hong Mi-ran တို့ ညီအစ်မ ဖြစ်တာကြောင့် ကောင်းမယ် မကောင်းဘူး ဆိုတာကိုတော့ တွေးနေစရာမလိုတော့လောက်ဘူး ထင်ပါတယ် …
အစက မကြည့်ခင်ကတော့ နည်းနည်းတော့ စိတ်ထဲထင့်မိတာပေါ့ … ကိုယ်ငယ်ငယ်လေးတည်းက သဘောကျခဲ့တဲ့ ” ဝူခုန်း ” ဇာတ်လမ်းကို Romance , Comedy တွေနဲ့ Korea တွေက ဘယ်လိုများ ပုံဖော်မလဲပေါ့ … ဒါပေမဲ့လည်း ထွက်လာလို့ ကြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ တော်တော်လဲ သဘောကျမိပါတယ် …
– စွန်းဝူခုန်း ကို အခြေခံထားတဲ့ စွန်းအို့ဂွန်း ကတော့ ကောင်းကင်ဘုံ က နှင်ချခံထားရပြီးနောက် … လူ့ပြည်မှာ မကောင်းဆိုးဝါးတွေကို လိုက်နှိမ်နင်းပြီး လူသားတွေကို ကယ်တင်ရင်း ကောင်းကင်ဘုံပေါ် ပြန်ချေချရနိုင်ဖို့အရေးအတွက် point တွေ စုဆောင်းလျက်ရှိပါတယ် … ထိုနေရာမှာ မင်းသား Lee Saung-gi က ပါဝင်သရုပ်ဆောင်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် …
– ကျွဲမိစ္ဆာဘုရင် ကို အခြေခံထားတဲ့ ဝူမာဝမ် ကတော့ လူ့ပြည်က Lucifer Entertainments ရဲ့ ဥက္ကဌတစ်ဦးပါ … Entertainment တစ်ခုလုံးရဲ့ Artist တွေ အားလုံးဟာ နတ်ဆိုးတွေ ဖြစ်ကြပြီး … Entertainment ကို အသုံးချရင်း ပိုက်ဆံရှာနိုင်ရုံတင်မက စွမ်းအင်လုံးတွေပါ စုဆောင်းနိုင်တဲ့ အောင်မြင်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ဝူမာဝမ် အဖြစ် မင်းသားကြီး Cha Seung-won က ပါဝင်သရုပ်ထားပါတယ် …
– ထျန်ကျန်း ကိုယ်တော် ကို အခြေခံထားတဲ့ ဂျင်ဆွန်းမီ ကတော့ လူပြည်မှာ လူသားကောင်မလေးတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ပရလောကသားတွေကို မြင်နိုင်တဲ့ လူသားကောင်မလေးတစ်ဦးပေါ့ … ဟန်းဘစ်အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်၏ ဥက္ကဌ တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး စီးပွားရေးမှာ အောင်မြင်ပြီး ခေါင်းမာတဲ့ ကောင်မလေး ဂျင်ဆွန်းမီ အဖြစ် မင်းသမီး Oh Yeon-seo က ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် …
– ပါကျဲ ကို အခြေခံထားတဲ့ P.K ( ဂျိုပယ်ဂယ် ) က တော့ ဝူမာဝမ် ရဲ့ Lucifer Entertainments အောက်မှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ Top Star တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ် … အမျိုးသမီးတွေကို ဖြားယောင်းပြီး သူတို့ဆီကနေ ဘဝအင်အားကို ထုတ်ယူတဲ့ P.K အဖြစ် F.T. Island ရဲ့ Main Vocalists ဖြစ်သူ Lee Hong-gi က ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် …
– ရှာဝူဂျင်း ကို အခြေခံထားတဲ့ ယွန်းဒယ်ဆုတ် က တော့ MSUN Mobile ထုတ်လုပ်ရေး Company တစ်ခုရဲ့ CEO တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် … စွန်းအို့ဂွန်း နှင့် အရင်းနှီးဆုံး ညီငယ်တစ်ယောက် ဖြစ်ပြီး Jang Gwang က ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် ….
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကိုပြောပြရမယ်ဆိုရင် – – –
ဂျင်ဆွန်းမီ က သာမန်လူသားတွေ မမြင်နိုင်တဲ့ အရာတွေကို တွေ့မြင်နိုင်တဲ့ လူသားတစ်ဦးပါ … စွန်းအို့ဂွန်း ကို ကောင်းကင်ဘုံ က စကျင်တောင်မှာ အကျဉ်းချထားချိန်မှာ ဂျင်ဆွန်းမီ က အကြောင်းကြောင်းကြောင့် စွန်းအို့ဂွန်း ဆီ ရောက်သွားခဲ့ရပါတယ် …
စွန်းအို့ဂွန်း က သူ့ကိုလွှတ်ပေးမယ်ဆိုရင် ပရလောကသားတွေကို အမြဲမြင်တွေ့နေရပြီး အပေါင်းအသင်းမရှိ အမြဲကြောက်လန့်နေရတဲ့ ဂျင်ဆွန်းမီ လေးကို ” ငါ့နာမည်ကို ခေါ်လိုက်တိုင်း မင်းရှေ့ပေါ်လာပြီး ကာကွယ်ပေးပါ့မယ် ” ဆိုပြီး မက်လုံးတစ်ချို့ပေးကား စာချုပ်ချုပ်ပြီး သူ့ကို လွှတ်စေခဲ့ပါတယ် …
တရုတ်ဗားရှင်းများကတည်းက ဆိုးသွမ်းတဲ့ မျောက်စုတ် ဟာ ကိုရီးယားဗားရှင်းမှာလည်း တရုတ်ဗားရှင်းနဲ့ မခြားမနားပါပဲ … လွတ်တဲ့အချိ်န်မှာတော့ ဂျင်ဆွန်းမီ လေး နဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ စာချုပ်ကို မဖောက်ဖျက်ပေမယ့်လည်း ကောင်မလေး မှတ်ဉာဏ်ထဲကနေ သူ့နာမည်ကို သူပြောပြခဲ့တဲ့ မှတ်ဉာဏ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ထုတ်ယူပြီး သူ့ကို ခေါ်လို့မရအောင် လုပ်ပြီး ထွက်သွားခဲ့ပါတယ် …
ဒီလိုနဲ့ ၂၅ နှစ်ကြာပြီးတဲ့နောက် အမှတ်မထင်ပဲ ဂျင်ဆွန်းမီ နဲ့ စွန်းအို့ဂွန်း တို့ ပြန်တွေ့ကြတဲ့အခါ …
စွန်းအို့ဂွန်း ကို လွှတ်ပေးမိတဲ့အတွက် နတ်ဆိုးတိုင်းက သူတို့ရဲ့ စွမ်းအားတိုးအောင် စားသုံးချင်လှတဲ့ ” ဆန်းဂျန်း ( ထျန်ကျန်း ကိုယ်တော် ) ” ရဲ့ ကံကြမ္မာကို ဂျင်ဆွန်းမီ အား ထည့်ပေးပြီး ကျိန်စာသင့်စေတဲ့အခါ …
စွန်းအို့ဂွန်း ကိုယ်တိုင် စားဖို့ဆိုပြီး လိုက်လံရှာဖွေနေတဲ့ ဆန်းဂျန်း က လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၅ နှစ်က သူ့ကိုလွှတ်ပေးခဲ့တဲ့ , သူနဲ့စာချုပ် ချုပ်ခဲ့တဲ့ ကောင်မလေး ဂျင်ဆွန်းမီ ဖြစ်နေသောအခါ …
တရုတ်တွေ ရဲ့ “ Journey to the West “ Base ယူ ထားပေမယ့် character တွေရဲ့ အကျင့်လေးတွေက အစ ကွဲပြားတာကို မြင်တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် …
IMDb မှာ 9.5/10 တောင် ရရှိထားတဲ့ TV Show တစ်ခုဖြစ်တဲ့ အပြင် လက်ရှိမှာလည်း အ hot ဆုံး series တစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် ကြည့်ရှုသင့်တဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ခုလို့ အကြံပေးလိုက်ပါရစေ ….
Translator : Ziven , Elvis & Pluviophile
Starring: Cha Seung-won, Jang Gwang, Kal So-won, Kim Seong-oh, Lee El, Lee Hong-ki, Lee Se-young, Lee Seung-gi, Oh Yeon-Seo, Song Jong-ho, Sung Hyuk, Sung Ji-Ru, Yoon Bo-ra,
2017 ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ အပိုင်းရှည် Ongoing KDrama လေး ဘယ်မှာမှ တင်တာမတွေ့သေးလို့ Myanmar Asian TV Channel မှ တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ် … ဇာတ်လမ်းထဲမှာ အဓိကသရုပ်ဆောင်နှစ်ယောက်အဖြစ် ” Park Si Hoo ” (The Princess’s Man) နဲ့ ” Shin Hye…